Paul's 1st Letter to Timothy – 2trondro
Home / Baiboly / Epistily / Paul's 1st Letter to Timothy
1:1 Paul, Apostolin'i Kristy Jesosy noho ny fahefana, Mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika,
1:2 ho an'i Timoty, zanaka malala ao amin'ny finoana. Grace, famindram-po, sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy Tompontsika.
1:3 Ankehitriny dia nangataka anao hitoetra any Efesosy, raha mbola lasa nankany Makedonia, mba hiteny mafy manohitra ny sasany, izay efa nampianatra fomba hafa,
1:4 manohitra ireo izay efa mitandrina ny anganongano sy ny tantaram-pirazanana tsy misy farany. Izany zavatra izany ankehitriny fanontaniana toy ny hoe izy ireo no lehibe noho ny fampandrosoana izay avy amin'Andriamanitra, izay amin'ny finoana.
1:5 Ary ny tanjona ny fampianarana dia fitiavana avy amin'ny fo madio, sy ny fieritreretana tsara, ary ny finoana tsy mihatsaravelatsihy.
1:6 Misy olona, mifindrafindra miala izany, efa nivily ho foana fitolokoana,
1:7 te-ho mpampiana-dalàna, fa ny zavatra tsy fantany akory fa raha ny tenany dia nanao hoe:, na ny tena maha izy nilaza momba ireo zavatra ireo.
1:8 Nefa fantatsika fa tsara ny lalàna, raha mampiasa izany araka ny tokony ho.
1:9 Ny fahafantarana izany, fa ny lalàna dia tsy teo amin'ny toerana ho an'ny marina, fa hamonjy ny tsy marina sy ny maditra, fa ny ratsy fanahy sy ny mpanota, fa ny ratsy fanahy sy ny voaloto, ho an'ireo izay manao patricide, matricide, na ny vono olona,
1:10 fa ny mpijangajanga, ho an'ny lehilahy izay matory amin'ny lahy, fa mpaka an-keriny, ny mpandainga, for perjurers, ary na inona na inona hafa mifanohitra amin'ny fampianarana tsy misy kilema,
1:11 izay, araka ny filazantsaran'ny voninahitr'Andriamanitra finaritra, ny Filazantsara izay efa nankinina tamiko.
1:12 Misaotra ho azy izay nampahery ahy, Kristy Jesosy Tompontsika, satria efa nihevitra ahy mahatoky, mametraka ahy ao amin'ny fanompoana,
1:13 na dia teo aloha Mpanevateva an'Andriamanitra aho,, sady mpanenjika, ary contemptuous. Fa avy eo aho nahazo ny famindram-pon'Andriamanitra. Fa efa manao ny tsy nahy, ao amin'ny tsy finoana.
1:14 Ary toy izany ny fahasoavan'ny Tompontsika be dia be, miaraka amin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'i Kristy Jesosy.
1:15 Izany Mahatoky izao teny izao, ary mendrika ny fanekena ny olona rehetra, fa i Kristy Jesosy, nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hitondra famonjena ho mpanota, izay itoerako voalohany.
1:16 Fa izany noho izany izay nahazo famindram-po, ka eo amiko toy ny aloha, Kristy Jesosy dia hampiseho faharetana rehetra, fa ny fampianarana ny ireo izay mino Azy ho fiainana mandrakizay.
1:17 Koa dia, ho an'ny Mpanjaka mandrakizay, ny tsy mety maty, tsy hita maso, Andriamanitra irery, anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.
1:18 Izany didy izany ho aminareo no atolotro, zanako Timothy, araka ny mpaminany izay nialoha làlana anareo ianareo: fa manompo eo aminy tahaka ny miaramila amin'ny ady tsara,
1:19 mitana ny finoana sy ny fieritreretana tsara, manohitra ireo izay, ny nanda ireo zavatra ireo, Efa nanao vaky sambo ny amin'ny finoana.
1:20 Anisan'izany ny Hymeneo sy Aleksandro, izay efa natolotro ho an'i Satana, mba hofaizana tsy hiteny ratsy.
2:1 Ary toy izany koa mangataka aminareo aho, voalohany indrindra, mba mivavaka, vavaka, fangatahana, ary fisaorana ho an'ny olona rehetra,
2:2 ho an'ny mpanjaka, sy ho an'ny rehetra izay teny amin'ny fitoerana avo, ka mba hitarika miadana sy milamina ny fiainana ao amin'ny fivavahana rehetra sy ny fahadiovam-pitondrantena.
2:3 Izany no tsara ka ankasitrahana eo imason'Andriamanitra, Mpamonjy antsika,
2:4 izay te ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga amin'ny iray fahalalana tsara ny fahamarinana.
2:5 Fa iray no Andriamanitra, ary iray Mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, ny lehilahy Kristy Jesosy,
2:6 izay nanolotra ny tenany ho fanavotana ho an'ny rehetra, ho vavolombelona amin'ny fotoany.
2:7 Izany fijoroana ho vavolombelona, Izaho no nanendrena ahy ho mpitory sy Apostoly, (Milaza ny marina aho, Tsy mandainga aho) amin'ny maha-mpampianatra ny jentilisa, amin'ny finoana sy ny fahamarinana.
2:8 Noho izany, Tiako ny lehilahy hivavaka eny tontolo eny, tontolo eny manandra-tanana madio, tsy amin'ny fahatezerana na fifandirana.
2:9 Toy izany koa, ny vehivavy dia tokony ho manao akanjo Mety indrindra, firavahanareo ny tenany amin'ny compunction sy ny fifehezan-tena, fa tsy amin'ny volo mirandrana, na ny volamena, na vato soa, na fitafiana saro-bidy,
2:10 fa amin'ny fomba mety ny vehivavy manaiky ny fivavahana izay amin'ny alalan'ny asa tsara.
2:11 Aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka hanaiky tsara.
2:12 Fa tsy avelako hampianatra ny vehivavy, na ho amin'ny fahefana hanapaka ny lehilahy, fa ho amin'ny fahanginana.
2:13 Fa Adama no natao voalohany, vao Eva.
2:14 Ary tsy Adama no voafitaka, fa ny vehivavy, rehefa voafitaka, teo amin'ny fandikan-dalàna.
2:15 Kanefa dia ho voavonjy amin'ny alalan'ny nitondra ny ankizy, raha izy no mbola ao amin'ny finoana sy ny fitiavana, ary amin'ny fahamasinana miaraka amin'ny fifehezan-tena.
3:1 Izany Mahatoky izao teny izao: Raha misy olona maniry ny Eveka, dia maniry asa tsara.
3:2 Noho izany, dia ilaina ny eveka mba ho mihoatra noho baraka, dia lehilahy manambady tokana, mahonon-tena, hendry, mamindra fo, madio, tia mandray vahiny, mpampianatra,
3:3 tsy mpimamo, tsy combative fa tsy nahasakana, tsy tia ady, tsy mpitia vola;
3:4 Fa ny olona izay mitondra ny tranony tsara, manana zanaka izay ambany amin'ny fahadiovam-pitiavana rehetra.
3:5 Fa raha misy olona tsy mahay mba hitarika an-tranony, ahoana no fikarakara ny Fiangonan'Andriamanitra?
3:6 Tsy maintsy tsy ho vao niova fo, fandrao, rehefa faly ny avonavona, mba lavo eo ambany ny teny ny devoly.
3:7 Ary ilaina ho azy ihany koa ny manana fijoroana ho vavolombelona tsara avy ny any ivelany, ka dia tsy latsaka ao ratsy laza sy ny fandriky ny devoly.
3:8 Toy izany koa, diakona dia tsy maintsy ho madio fitondrantena, Tsy avo roa heny-tongued, tsy ho andevozin'ny divay be, tsy nanenjika voaloton'ny tombony,
3:9 mitana ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio.
3:10 Ary ireo zavatra ireo dia tokony ho porofoina aloha, ary avy eo mba hanompo, satria tsy hanan-tsiny.
3:11 Toy izany koa, ny vehivavy dia tsy maintsy ho madio fitondrantena, tsy mpanendrikendrika, mahonon-tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra.
3:12 Ny diakona dia tokony ho ny lehilahy tokana, ny olona izay mitarika ny zanany sy ny ankohonany.
3:13 Ho an'ireo izay efa nanompo tsara ho an'ny tenany dia mahazo toerana tsara, ary maro be ny fahatokiana amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy.
3:14 Soratako ho anareo izany zavatra izany, miaraka amin'ny fanantenana fa ho avy any aminareo tsy ho ela.
3:15 Fa, Ary izaho, raha tara, ho fantatra ny fomba izay dia ilaina ny fitondran-tenanao ao an-tranon'Andriamanitra, izay ny Fiangonana velona, ny andry ary ny fototry ny fahamarinana.
3:16 Ary dia mazava lehibe, izany zava-miafina ny toe, izay naseho teo amin'ny nofo, izay nohamarinina tao amin'ny Fanahy, izay efa niseho anjely, izay efa nitory tamin'ny hafa firenena, izay nino amin'izao tontolo izao, izay efa nakarina tamin'ny voninahitra.
4:1 Ary ny Fanahy mazava tsara fa, amin'ny farany fotoana, olona sasany dia hiala amin'ny finoana, mandinika ny fanahy ny fahadisoana sy ny fampianaran'ny demonia,
4:2 miteny lainga amin'ny fihatsarambelatsihy, ary ny feon'ny fieritreretany rehefa seared,
4:3 mandrara ny fanambadiana, mifady sakafo, izay noharian 'Andriamanitra mba hankasitrahana amin'ny fisaorana amin'ny alalan'ny mpanompo mahatoky sy' ireo izay efa nahafantatra ny fahamarinana.
4:4 Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony holavina izay raisina amin'ny fisaorana,;
4:5 fa efa nohamasinina noho ny Tenin'Andriamanitra sy amin'ny alalan'ny vavaka.
4:6 By nanolotra izany tamin'ny rahalahy, ianao, dia ho mpanompo tsara an'i Kristy Jesosy, tezaina amin'ny tenin'ny finoana, sy ny fampianarana tsara izay efa antoka.
4:7 Fa tsy ny adaladala angano fahiny vehivavy. Ary mampiasà ny tenanao mba Mandroso amin'ny toe.
4:8 Fa ny fampiasana ny tena izany dia toa mahasoa. Fa fivavahana no mahasoa amin'ny zava-drehetra, mitana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana, ao amin'ny ankehitriny sy amin'ny hoavy.
4:9 Mahatoky izao teny izao ka tokony hekena amin'ny fankasitrahana feno.
4:10 Ary noho izany izahay miasa fatratra sy haratsina: satria izahay manantena an'Andriamanitra velona, Izay Mpamonjy ny olona rehetra, indrindra indrindra fa ny mpino.
4:11 Hampianatra ary hampianatra ireo zavatra ireo.
4:12 Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona ny tanora, fa aoka ho tonga fianarana eo amin'ny mahatoky amin'ny teny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovam-pitiavana.
4:13 Mandra-tonga, tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ary ny fotopampianarana.
4:14 Aza ho vonona hanao tsirambina ny fahasoavana izay ao anatinareo, izay nomena anao tamin'ny faminaniana, ny fametrahan-tanana 'ny fisoronana.
4:15 Saintsaino ireo zavatra ireo, ka ny fandrosoanao mba hiseho amin'ny rehetra.
4:16 Tandremo ny tenanao sy ny fotopampianarana. Miezaha ireo zavatra ireo. Fa raha manao izany, ianao, dia hamonjy ny tenanao sy izay mihaino anao.
5:1 Tsy tokony hiteny mafy lehilahy ho tratrantitra, fa hifandahatra aminy, toy ny hoe izy no Rainareo; amin'ny zatovolahy, toy ny rahalahy;
5:2 amin'ny vavy antitra, tahaka ny reny; amin'ny zatovovavy, amin'ny fahadiovam-pitiavana rehetra, toy ny rahavavy.
5:3 Manajà ireo mpitondratena izay efa mpitondratena marina.
5:4 Fa raha misy mpitondratena manan-janaka na zafy, aoka aloha hianatra hitantana ny ankohonany, ary manatanteraka, mifandimby, azy ny adidy ny ray aman-dreniny; fa izany no ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra.
5:5 Fa izy izay tena mpitondratena sy ny mahantra, aoka manantena an'Andriamanitra, ary aoka ho maika amin'ny fangatahana sy ny fivavahana, andro aman'alina.
5:6 Fa izy izay miaina amin'ny fahafinaretana dia maty, raha velona.
5:7 Ary omeo torolalana ao amin'ity, mba ho mihoatra noho tsiny.
5:8 Fa raha misy tsy miahy ny, ary indrindra ho an 'ireo ny ankohonan'ny, dia efa nandà ny finoana, ary izy dia ratsy noho ny tsy mino.
5:9 Aoka ho voafidy ny mpitondratena izay latsaka noho ny enim-polo tsy taona, izay ny vadin'ny lehilahy iray,
5:10 izay manana fijoroana ho vavolombelona ny azy ny asa tsara: raha izy efa nahita fianarana ny ankizy, na Nanome vahiny, na efa nanasa ny tongotry ny olona masina, na efa nanao fanompoam-pivavahana ho an'ireo mijaly fahoriana, na efa nanenjika misy karazana asa tsara.
5:11 Fa tsy ny vehivavy mpitondratena tanora. Fa indray mandeha efa Niroborobo ao amin'i Kristy, dia te-hanambady,
5:12 miteraka fanamelohana, satria tsy miraharaha izay faratampony finoana.
5:13 Ary satria tamin'izany andro izany ihany koa ny potsiny ny, izy ireo mianatra ny handeha isan-trano, raha tsy malaina ihany, fa be resaka sy liana, miresaka ny amin'ny zavatra izay tsy mahakasika azy ireo.
5:14 Noho izany, Tiako ny tanora ny vehivavy hanambady, miteraka ny ankizy, ho reny ny fianakaviana, mba hanome fahafahana ho tsy vonona ny fahavalo hiteny ratsy.
5:15 Fa ny olona sasany no efa niverina ho an'i Satana.
5:16 Raha misy eo amin'ny mpino no mpitondratena, aoka hanompo azy, ary tsy hahavaky tratra ny Fiangonana, ka tsy mety ho ampy ho an'ireo izay tena mpitondratena.
5:17 Aoka ny mpisorona izay mitondra tsara hatao mendrika ny avo roa heny ny voninahitra, indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana.
5:18 Fa hoy ny Soratra Masina: "Aza manakombona ny vavan'ny omby araka ny manitsaka ny vary,"Ary, "Ny mpiasa dia miendrika hahazo ny karamany."
5:19 Aza ho vonona hanaiky izay hiampangana ny mpisorona, afa-tsy eo ambanin'ny vavolombelona roa na telo.
5:20 Anaro ny mpanota eo imason'ny olona rehetra, ka ny olon-kafa mba hatahotra.
5:21 Mijoro ho vavolombelona aho eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy ary ny anjely voafidy, fa tokony hitandrina izany zavatra izany tsy misy olon-tiana, manao na inona na inona izay mampiseho tavan'olona amin'ny andaniny roa.
5:22 Tsy tokony ho maika ny hametraka tanana amin'ny olona, tsy tokony handray anjara amin'ny fahotan'ny ivelany. Aoka ianao hadio fitondran-.
5:23 Aza manohy ihany no hisotro rano, fa ny mampiasa divay kely, noho ny kibo sy ny aretina matetika.
5:24 Ny fahotan'ny olona sasany efa naseho, teo aloha ho amin'ny fitsarana, fa ny an'ny olon-kafa dia miseho aty aoriana.
5:25 Toy izany koa, koa, asa tsara efa naseho, fa na dia tsy, izy ireo tsy mbola miafina.
6:1 Na iza na iza no mpanompo eo ambanin'ny zioga, Aoka izy ireo handinika ny tompony mba ho mendrika ny voninahitra rehetra, fandrao ny anarana sy ny fotopampianaran 'ny Tompo no niteny ratsy.
6:2 Fa ireo izay manana tompo mino, aoka tsy hanao tsinontsinona azy, satria rahalahy izy ireo, fa manompo azy rehetra vao mainka satria mino sy malala, mpandray anjara iray ihany
fanompoana. Mampianatra sy mananatra ireo zavatra ireo.
6:3 Raha misy mampianatra raha tsy izany, ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy, sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe araka,
6:4 dia izy no miavonavona, mahalala na inona na inona, nefa Nijaly anivon'ireo ny fanontaniana sy ny fifandirana ny teny. Avy hitsangana ireo fialonana, fifandirana, fitenenan-dratsy, ratsy ahiahy:
6:5 ny ady ny olona, ​​izay efa vetaveta saina sy matiantoka ny fahamarinana, izay mihevitra tombony ho tia fivavahana.
6:6 Fa fivavahana amin'ny fahaleovanay dia tombony lehibe.
6:7 Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao, ary tsy misy isalasalana fa afaka mandray na inona na inona izy.
6:8 Fa, manana sakafo ary ny sasany karazana manarona, tokony ho afa-po amin'izany.
6:9 Ho an'ireo izay te ho tonga mpanankarena dia latsaka ao amin'ny fakam-panahy sy ho eo an-fandriky ny devoly, ary ho maro ny tsy misy ilàna azy ary mampidi-doza ny faniriana, izay hisitrihana olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana.
6:10 Fa faniriana no fototry ny ratsy rehetra. Misy olona, noana toy izany, tafasaraka amin'ny finoana, sy voafandrika ny tenany tamin'ny alahelo be.
6:11 fa ianareo, Ry lehilahin'Andriamanitra ô, handositra izany zavatra izany, ary tena hanaraka ny rariny, fivavahana, finoana, fiantrana, faharetana, fahalemem-panahy.
6:12 Miadia ny ady tsaran'ny finoana. Hihazona ny fiainana mandrakizay izay efa nantsoina, ary hanao fiekem-pinoana tsara teo imason'ny vavolombelona maro.
6:13 Mampianiana anareo, eo imason 'Andriamanitra, izay enlivens ny zava-drehetra, ary eo imason'i Kristy Jesosy, izay nanome ny fijoroana ho vavolombelona ny asa tsara eo ambany Pontio Pilato,
6:14 mba hitandrina ny didy, immaculately, irreproachably, amin 'ny fiverenan'i Jesosy Kristy Tompontsika.
6:15 Fa amin'ny fotoana, dia hita ny Andriana finaritra sady ihany no Power, ny Mpanjakan'ny mpanjaka sy ny Tompon'ny tompo,
6:16 izay hany mihazona tsy mety maty, ary izay onenan'i ny tsy azo nidirana fahazavana, izay tsy nisy nahita, tsy hariva, dia afaka mahita, iza no voninahitra sy ny fanapahana maharitra mandrakizay. Amen.
6:17 Hampianatra ny manan-karena tontolo izao tsy mba manana toe-tsaina ambony kokoa, na manantena ao amin'ny fisalasalana ny harena, fa velona Andriamanitra, Izay manome antsika ny zavatra rehetra be dia be mankafy,
6:18 ary hanao soa, ho karena amin'ny asa tsara, mba hanome avy hatrany, mizara,
6:19 mba hanangona ho an'ny tenany ny harena ny fanorenana tsara ho amin'ny hoavy, mba hahazo ny fiainana tena.
6:20 ry Timoty, mpiambina izay efa napetraka aminao, ny fisorohana ny feon'ny mpihatsaravelatsihy novelties sy ny mpanohitra hevitra, izay lainga atao hoe fahalalana.
6:21 Misy olona, nampanantena izany zavatra izany, efa levona niala tamin'ny finoana. Enga anie aminareo anie ny fahasoavana. Amen.